Ndokumbira utarise: iyo Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) zvinyorwa zvinyorwa zvisiri zvemanyepo: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 23 March 2020	• 9 Comments
The Covid-19 Janet Ossebeard (madenderedzwa ezvirimwa, Ninefornews) coronavirus zvinyorwa (ona pazasi) ndiwo musungo. Iwe unofanirwa kuziva kuti IBM's Yakadzika Blue supercomputer al mu 1996 yemakwikwi epasi rose Kasparov ane chess uye Google Alphabet's Quantum Computer muna 2016 mhare yenyika yepasi rose yemitambo yakaoma Enda wakakwanisa kurova. Mukuwedzera, iwe unofanirwa kuziva kuti vezvenhau vanokwanisa kutanga zvese, kusanganisira zvese (zvinosanganisira zano rekurangana) ivo pachavo.
Vanogona kuisa zvese pamwe chete semufirimu uye voita kuti iwe ufunge kuti inhau chaidzo, kuitira kuti manyepo macheki enhau akadai saNuCheck.nl anogona kupisa pasi pane imwe nguva inotevera. Nezvese zviunganidzwa zvikuru zve data nhasi, vatungamiriri venyika vanoziva nzira yekutamba masasi kusvika padanho rakanangana nerinotarisirwa.
Chinhu chakangwara pamusoro peizvi zvese ndechekuti kune chokwadi chakawanda mukuti nhau dzekunyepedzera dzinoiswa mukushandiswa, asi nekuda kwekuti vanhu vanozouya ne “humbowo” hwekuti pane nhau dzenhema, vanogona kudzingira mwana nemvura yekugeza.
Ndinoda kusimbisa izvi kwauri uye kukupa zano kuti unyatso kuverenga uye kugovera bhuku rangu. Iko hakuna munhu wokuratidza iwe nzira dzekupikiswa dzakadzorwa. Kwete Ninefornews, Kwete WantToKnow, Kwete Jensen, Kwete Niburu, Kwete infowars. Tinodaro nekuti ndivo yekupedzisira mutsetse. Usadiridza mariri! In ichi chinyorwa uye mubhuku rangu ndinotsanangura iri rakarongwa kupikisa zano zvakadzama.
Teerera pano semuenzaniso wenzira yekupedzisira nzira: voorbeeld
Mune ino post kubva www.tourarabia.com ona kuti vhidhiyo yakaitwa naJanet Ossebaard ichakurumidza kuve kutumidzwa senhau dzenhema.
Zvangu zvekukumbira ruregerero, ini handidi kuve mutete uye ndakangwara, asi ndakasiya basa rangu anopfuura makore manomwe apfuura nekuti ndakatsamwiswa nenhema dziri munhau. Panguva iyoyo, semuenzaniso, ini ndakanga ndichiri kutenda muAlex Jones 'infowars uye ndakaguma mune mamwe maitiro enhau enhau. Saka ndaigona kuwana kubva mukati kuti ivo vese havana kufara zvakanyanya neiyi inoshamisa dhadha mune yekuruma (ona tsanangudzo).
Pinza uye usawa kune mambure echengetedzo uye anodzora anopokana nemuraraungu murwi (ona rangu bhuku kuti uwedzere kutsanangurwa, zvisinei voor zvakateerana izvi).
Mumazuva achangopfuura, mavhidhiyo akawanda akatumirwa kwandiri kuti andibate uye kuti andikurudzire kutumira mameseji akadaro anogona kunyorwa senhau dzenhema; pamwe mukuyedza kusviisa saiti yangu. Saka iwe unofanirwa chaizvo kuve unochenjera uye uchiramba uchitsoropodza. Mubhuku rangu ini ndinotsanangura nzira yekuenda kune yega chaiyo sosi yeruzivo (yako yepakutanga) uye maitiro atingaite isu hutachiona iyi system.
"Nzira yakanaka yekudzora vanopikisa ndeyekutungamira iwe pachako", Vladimir Lenin
Source chinyorwa listings: destentor.nl, ninefornews.nl, wikipedia.org bbc.com
Chikonzero nei Ole Dammegard yakakosha kune mamwe mavara
Chikonzero nei isu takanyengerwa mumusungo wekuchengetedzwa kwe911 kuburikidza nevanhu vakaita saGeorge van Houts
Martin Vrijland anorwisana here? Aiwa: Verenga pano nei zvisiri izvo!
Tags: zvimwe, mvura yekugeza, nzvimbo yekurangana, conspiracy theory, rangano rwenhema, inodzorwa, coronavirus, Covid-19, vhidhiyo, nyepera, Featured, Janet, mutsa, vezvenhau, nhau dzakaipa, nhau, ninefornews, anopikisa, Ox-ndebvu, evasar.nl, musungo
23 March 2020 pa 23: 25
Semuenzaniso, unonyatsotenda here kuti Robert Jensen anoshora chaiko? Iye anoita zvakanaka mavhidhiyo! Ndeipi studio yaunofunga kuti yaanogadzirira kuita show yake? Izvo zve (General Dutch Press Agency) John de Mol zvimwe?
Chaizvoizvo simuka ... mambure ekuchengetedza: yekupedzisira mutsara
Ivo vanopedzisira vabviswa nechinhu chinotsikisa kuitira kuti vaise mutsipa wakachengetedzwa - nevateveri nevese - muvheni yemoto.
Iko REAL shanduko haibve kubva kuvarume nevakadzi kumashure kwekamera! Izvo zvinokuchengeta iwe mukunyepedzera kuti ivo vachakugadzirira iwe. Iko REAL shanduko inotanga nekutanga iwe pachako!
23 March 2020 pa 23: 45
Unoita sei vanhu sekunge vari kuona maThebhu. Sesame Street!… Pffff mira izvi kusanganisa kwechokwadi nezvisina basa! "Cabal," "Trump Muponesi," "Q" ("akanakira iwe"), uye zvimwe zvemhando yerunyararo rwekuchengetedza mharidzo.
Madam pachivande vanosimudzira zano remubatanidzwa!
Trump haazi muponesi! Uye reset yemari yakatumidzwa neiyi 'chirimwa denderedzwa' Madam yakarongedzwa nenzira kwayo uye iri kuunzwa kuburikidza nezviri kubuda nhasi pasi pe maziso ako, naTrump mune hood. Mepu yemugwagwa wakananga kuTechnical communististististari (satitari) "Runyararo Nyika" .. inokurudzirwa ne 'zvirimwa denderedzwa' Jannet Ossebaard Tekinoroji zvinoreva: inodzorwa nehunyanzvi ... saka AI ... dhata hombe: Chinese muenzaniso wehunyanzvi hwekudyidzana! Mubatanidzwa wevatungamiriri! Ndo zviri kukurudzirwa nemukadzi uyu!
24 March 2020 pa 00: 20
Hee John de Mol: Diewertje Blok ingadai iri sarudzo iri nani pane ino yekuchengetedza net zano….
24 March 2020 pa 00: 35
Quote (9:30 min.): "Kana paine kuvharika kwakazara kwenzanga, musatya nekuti Operation Defender 2020 yakaiswa kuzosunga hurumende dzakashata."
Kwete 'chirimwa denderedzwa' ... chinozoshandiswa kumisa vanhu kuti vataurirane, kuti irege kupandukira kusungwa kwayo kwekupedzisira.
24 March 2020 pa 01: 15
Shill Micha Kat anokurudzira iyo yakafanana Q Anon kuchengetedzeka net nyaya
24 March 2020 pa 11: 49
Hwese kupenga. Uye vakaverenga zvakanyorwa pasi apa, ivo zvakare vanokora hove, mutsara uye sinker. Ehe saizvozvo vangada kutenda kutenda meseji.
Mukoma mukoma achatinunura kubva kune yakaipa elites, Love great mukoma, trust great mukoma, vimbai naTrump, vimbai neuto. Kurongeka kwenyika itsva yerunyararo rudo nekuwirirana kunobuda
Vanozomuka munzira inotyisa kana kunonoka.
MuUS, zvakare, ikozvino iwe une urwu rudzi rwekupenga munhu ari kuparidza rudzi urwu rwemharidzo. Sasquatch ichatinunura, vatorwa vachatinunura, VaTrump vanotinunura, mauto achatinunura.
24 March 2020 pa 12: 29
Mazhinji lyrical reaction pasi peiyi vhidhiyo (covid19 chikamu 3). Tarisa uone dzimwe nhoroondo dziri kumashure kwemashoko acho. Vazhinji vane nezve akafanana youtube mavhidhiyo uye 1 kana 2 vanyoreri. Weild weYouTube account anotaridza senge fake account kana akagadzirwa nevashoma vanhu vamwe chete
24 March 2020 pa 12: 33
Iyo izere nemakesi ekunyepedzera, akadzika ekunyepa nhoroondo uye AI bots inopindura munhau yemagariro. Iwe haugone kutora mhinduro kumatanho makuru ezvemagariro ehupenyu uye zvakadzama.
24 March 2020 pa 16: 43
« Iyo Bill Gates 'quantum dots' iyo isina waya ID kadhi iyo inocherekedza kana iwe uine coronavirus uye kana iwe wakachengetedzwa
Coronavirus covid-19 Lockdown update: Paunomuka uye ukaona kuti wabatwa, chii chaungaita? »
Total Visits: 1.470.533
Martin Vrijland op Corona Dambudziko: Zvinogona kutora kusvika pamakore maviri kusvika matatu kuti ubve kunze kwekuvhara kunze kwekutanga kwekutsvaga uye maapps
Martin Vrijland op Musangano wevatori venhau Mark Rutte naHugo de Jonge: iyo imwe nehafu yemamita nzanga uye kusimudzirwa kwemapurogiramu